Maitiro Ekuita Fuel Kutengesa neCurated Yemukati Zvemukati | Martech Zone
Maitiro Ekuita Fuel Kutengesa neakakanganiswa Yemukati Zvemukati
Mugovera, Mbudzi 15, 2014 Chishanu, Mbudzi 14, 2014 Douglas Karr
Isu hatiedze kuzviita isu pachezvedu kuti tisu sosi yekushambadzira uye yekushambadzira tekinoroji paInternet. Tine hukama hwakakura nemamwe masayiti uye tinosimudzira vazhinji vatinoshanda navo vakanyora zvemukati zvinoshamisa pamusoro pemakore. Isu hatitarise kune yega saiti seanokwikwidza, isu pachinzvimbo tinovaona sezviwanikwa zvevateereri vedu. Sezvo isu tichiramba tichikura kusvika kwedu, isu tinoremekedzwa sechishandiso nekuda kwekukosha kwatinounza nharaunda yedu.
Isu tinowana mapaki uye yambiro pane misoro yekufarira mukati mezuva rese uye tinoverenga nekudzokorora dzese zvakanyatsonaka. Kana paine yakakura infographic yekugovana - isu tiri pairi. Kana mumwe munhu achinyora zvinomanikidza zvemukati zvekufarira, tinozvikurudzira munharaunda. Chero bedzi isu tichiramba tichipa kukosha, isu ticharamba tichikura kusvika kwedu. Iko kusvika kunoramba kuchitiunzira notoriety uye - pakupedzisira - inotungamira kubva kumakambani anoda rubatsiro rwedu. Mune mamwe mazwi, zvakagumirwa zvemukati iri zano rekutanga kwatiri.
Chii chinonzi Mushandisi Yakagadzirwa Zvemukati? UGC
Haisi B2B chete, zvakadaro. Kugadzira kukosha kwevatengi inzira inoshamisa zvakare. Uye kunyangwe kupfuura maindasitiri uye zvinyorwa zvehunyanzvi, izvo zvirimo zviri kugadzirwa nevashandisi vako zviri kuva chishamiso chakasimba kusimudzira zvigadzirwa zvako nemasevhisi, wedzera kusvika kwako, uwane kusvika kutsva uye chengetedza vatengi vakakura. Izvi zvemukati zvinozivikanwa seyakagadzirwa-inogadzirwa zvemukati, kana UGC.
Vatengi vanhasi vari kugara vachigadzira, kugovana uye kupedza mifananidzo, mavhidhiyo uye zvinyorwa. Izvi zvemagariro hazvizivikanwe chete, zvine simba. Kuwedzera uye nekuwedzera, vatengi vanoenda kune zvemukati zvemukati pavanenge vachitenga sarudzo. Usati wadzvanya Wedzera kungoro, ivo vanotsvaga chitambi chekubvumidzwa kubva kune vezera ravo uye shamwari. Iyi tsika inogadzira mukana wakakura wemabhurandi kutyaira mari. Asi iyo nzira kubva ku selfie kuenda kutengesa haigare ichiita seyakajeka. Mazhinji mabrands uye vatengesi vachiri kushaya zano rekutyaira commerce kubva kuGC.
Izvi zvitsva infographic kubva kuOfferPop inotsanangura matanho ekuunganidza uye kugadzirisa zvemukati zvemukati zvinoshanduka kuita zvekutengesa.
Tags: curated zvirimoofferpopzvemukati zvemagarirougcmushandisi akagadzira zvemukati
Chii chinonzi Email Kusimbiswa? Inoita Sei Kugunun'una?
Iri rako Bhizinesi Kugadzira Chero eaya Akajairwa Masocial Media Kukanganisa?